England oo isbadal ku samaynaysa ciyaaryahanada u safanaya – LaacibOnline
Rooney ayaa lagu wadaa in uusan u safanin England ciyaarta ay Isniinta la yeelanayso Slovakia
Wayne Rooney ayaa ka mid ah lix ciyaartoy oo la sheegay in Tababaraha Engalnd Roy Hodgson uu u qorsheeyay in ay nastaan marka ay dhacayso ciyaarta u dambaysa wareega isreebreebka ee ay Isniinta la yeelanayaan Slovakia.
Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling, Kyle Walker iyo Danny Rose ayaa lagu wadaa in ay fariistaan kuraasta badal sugayaasha.
Daniel Sturridge, Jamie Vardy, Jordan Henderson, Jack Wilshere, Nathaniel Clyne and Ryan Bertrand ayaa lagu bilaabi doonaa iyadoo England ay rajaynayso in ay kaalinta koobaad ugasho kooxaha kale ee ay ku loolamayaan qaybta B.
Slovakia waxaa laga yaabaa in aysan wax isbadal ah ku samaynin kooxdii ka badisay Ruushka.
Laakiin lix ciyaartoy ayaa ka haysta kaaraka jaalaha waxaana ka ciyaaryahanaad ka mid ah Martin Skrtel oo haddii uu kaar kale oo jaale ah qaato seegi doona ciyaar aad muhiim ugu ah wareegga ay isu soo harayaan 16-ka kooxood.
England waxay u baahan tahay hal dhibic si ay ugu gudubto wareega dambe, haddiise ay badiyaan waxay gali doonaan kaalinta koobaad ee qaybta B.
Hodgson ayaa sheegay in ahmiyadoodu ay tahay in ay u gudbaan wareega 16-ka.
← Manchester City oo ku guuleysatay horyaalka EPL
Khamiis, Jun 18, 2020-Kenya oo ku guuleysatay kursiga Golaha Amniga ee UN →
In South Jersey, it’s a Kennedy against a power broker favorite to challenge turncoat Rep. Van Drew
Macallinka PSG oo booskiisa baneeyay
Inter Milan oo aad u danaynaysa Yaya Toure